Nhau - Mazororo eNyika muna Chivabvu 2022
Multinational - Zuva Revashandi
International Labor Day, iro rinozivikanwawo seChivabvu 1 International Labor Day, Zuva reVashandi, uye International Day of Demonstrations, mhemberero inosimudzirwa nesangano revashandi pasi rose uye inopembererwa nevashandi nemakirasi ekushanda pasi rose musi waChivabvu 1 (Chivabvu 1) gore rega rega. .Zororo rekurangarira chiitiko cheHaymarket apo vashandi veChicago vakatsikirirwa nemapurisa ane zvombo pakurwa kwavo kwezuva remaawa masere.
Poland - Zuva reNyika
Zuva Renyika rePoland ndiMay 3, pakuvamba July 22. Pana April 5, 1991, Paramende yePoland yakapasisa mutemo wokuchinjira Zuva Renyika reRepublic of Poland kuva May 3.
Japan - Zuva revana
Zuva reVana veJapan izororo reJapan uye zororo renyika rinopembererwa musi wa5 Chivabvu wekarenda yekuMadokero (karenda yaGregory) gore rega rega, rinova zvakare zuva rekupedzisira reGoridhe Vhiki.Mutambo uyu wakashambadzwa uye wakaitwa neMutemo weZuva Remhemberero dzeNyika musi waChikunguru 20, 1948.
Mabasa: Manheru kana pazuva remutambo, mhuri dzine vana dzichasimudza mabhena ecarp muchivanze kana mubharukoni, uye kushandisa makeke emisipres nemadumplings emupunga sechikafu chemutambo.
Korea - Zuva revana
Zuva reVana muSouth Korea rakatanga muna 1923 uye rakashanduka kubva ku "Boys Day".Iri zvakare izororo reruzhinji muSouth Korea, rinowira muna Chivabvu 5 gore rega rega.
Mabasa: Vabereki vanowanzoendesa vana vavo kumapaki, kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka kana kuti kumwewo kunzvimbo dzokuvaraidza pazuva iri kuti vana vavo vagare vachifara panguva yezororo.
Zuva raAmai rakatangira kuUnited States.Muvambi wemutambo uyu aive Philadelphian Anna Jarvis.Musi waMay 9, 1906, amai vaAnna Jarvis vakafa zvinosiririsa.Gore rakatevera racho, akaronga mibato yokurangarira amai vake ndokukurudzira Vamwe vakataura nenzira yakafanana kuonga kwavo kuna vanamai vavo vakasiyana.
Chiitiko: Vanaamai vanowanzogamuchira zvipo pazuva iri.Carnations anoonekwa semaruva akatsaurirwa kuna amai vawo, uye ruva raamai kuChina ndiHemerocallis, inozivikanwawo seWangyoucao.
Russia - Zuva Rokukunda muGreat Patriotic War
Musi waChikumi 24, 1945, Soviet Union yakaita kufora kwayo kwekutanga kwemauto paRed Square kurangarira kukunda kweGreat Patriotic War.Mushure mekuparara kweSoviet Union, Russia yakaita mutambo wemauto eVictory Day musi wa9 Chivabvu gore rega kubva muna 1995.
Zuva reVesak (Zuva rekuzvarwa kwaBuddha, rinozivikanwawo seZuva reKugeza Buddha) ndiro zuva rakazvarwa Buddha, akawana kujekerwa, uye akafa.
Zuva reVesak Zuva rinotemerwa maererano nekarenda gore rega rega uye rinowira pazuva remwedzi wakazara muna Chivabvu.Nyika dzinonyora zuva iri (kana mazuva) sezororo revanhu vose dzinosanganisira Sri Lanka, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapore, Vietnam, nezvimwewo Vesak”.
Cameroon - Zuva reNyika
Muna 1960, French Mandate yeCameroon yakazvimiririra zvinoenderana nezvisungo zveUnited Nations uye yakamisa Republic of Cameroon.Musi waChivabvu 20, 1972, referendamu yakapasisa bumbiro idzva, ikabvisa hurongwa hwemubatanidzwa, uye ikamisa pakati peUnited Republic of Cameroon.Muna Ndira 1984, nyika yakatumidzwa zita rekuti Republic of Cameroon.Chivabvu 20 izuva renyika reCameroon.
Mabasa: Panguva iyoyo, guta guru reYaounde richaita maforamu nemauto, uye mutungamiri nevakuru vakuru vehurumende vachapinda mhemberero idzi.
Mhemberero yeChimurenga cheArgentina muna Chivabvu ndiMay 25, 1810, apo Dare reHurumende rakagadzwa muBuenos Aires kuti ripidigura Gavhuna weLa Plata, nyika yeSpain muSouth America.Naizvozvo, Chivabvu 25 inodomwa seZuva reChimurenga reArgentina uye zororo renyika muArgentina.
Mabasa: Mhemberero yokufora kwemauto yakaitwa, uye purezidhendi aripo akapa hurukuro;vanhu vakarova mapoto nemapani vachipembera;mireza nezvirogani zvaisimudzwa;vamwe vakadzi vakanga vakapfeka hembe dzechinyakare vaipfuura nomumhomho yevanhu vachiendesa mabhanana ane maribhoni ebhuruu;etc.
Joridhani - Zuva reIndependence
Zuva reRusununguko reJordani rinouya mushure meHondo Yenyika Yechipiri, apo kurwira kwevanhu veTransjordan vachipokana neBritain kwakakura nekukurumidza.Musi waKurume 22, 1946, Transjordan yakasaina Chibvumirano cheLondon neUnited Kingdom, ichibvisa mutemo weBritish, uye United Kingdom yakaziva rusununguko rweTransjordan.Musi waMay 25 wegore iroro, Abdullah akava mambo (akatonga kubva ku1946 kusvika ku1951).Nyika yakatumidzwa zita rekuti Hashemite Humambo hweTransjordan.
Mabasa: Zuva reNyika reRusununguko rinopembererwa nekuita maparade emotokari dzemauto, mafirework anoratidza nezvimwe zviitiko.
Germany - Zuva raBaba
Zuva raBaba veGermany rinotaurwa muchiGerman: Zuva raBaba reVatertag, kumabvazuva kweGermany kunewo “Zuva reMarume reMännertag” kana kuti “Mr.Herrentag's Day".Kuverenga kubva kuIsita, zuva rechimakumi mana mushure mezororo iZuva raBaba muGermany.
Mabasa: Zviitwa zvechiGerman zveZuva raBaba zvinotongwa nevarume vanokwira makomo kana kuchovha bhasikoro pamwechete;maGermany mazhinji anopemberera Zuva raBaba kumba, kana nekubuda kwenguva pfupi, barbecue yekunze nezvimwe zvakadaro.